वीरगञ्ज । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेट मार्पmत छुट्याएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’को बजेट पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा विवादित बनेको छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण चालू आवका लागि संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याइएको रू. ४ करोड खर्च नहुने सम्भावना बढेको हो ।
के हो विवादको जड ? नेकपाबाट संघीय संसद्मा समानुपातिक सांसदहरू चाँद तारा कुमारी र कर्णले पर्सा–३ को कार्यक्रम परामर्श समितिको सदस्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा आवेदन दिएका थिए । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) २०७५ ले समानुपातिक सांसदले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनै एकमा समितिको सदस्यका रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सांसद कर्णले भने नियम अनुसार नै आपूm समितिको संयोजक भएको दाबी गरिन् । ‘नियमावली संशोधन गरेर प्रक्रिया पुर्‍याइएको छ । सबै कुरा नियम अनुसार नै भएको छ,’ सांसद कर्णले आर्थिक अभियानसित भनिन्, ‘विकास बजेट उपयोग हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले म यो क्षेत्रमा काम गर्न आएकी हुँ ।’